Insiza Enhle - I-AOOD Technology Limited
I-AOOD ilwela ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezihamba phambili kumakhasimende ethu. Sibamba iqhaza ngenkuthalo esigabeni sokuqala samakhasimende ethu, sibheka ngokugcwele amasiginali namasistimu kagesi abo ahlukahlukene, isikhala, ukufakwa, imvelo kanye nezidingo zokusebenza, sibanikeze iziphakamiso zobungcweti futhi sibasize bathole isixazululo esibonakalayo esijikelezayo esisebenzisekayo-- isiliphu sendandatho.
Ukuphendula ngokushesha kuyisidingo esiyisisekelo kumthengisi ngamunye we-AOOD. Sigcina ukutholakala okungu-24/7 kumakhasimende ethu futhi siqinisekisa ukuthi imibuzo / izidingo zabo zingaxazululwa ngesikhathi esifushane. Lapho kukhona ukubambezeleka ekukhiqizeni, sigcina amakhasimende ethu enolwazi ngesikhathi.
Siphinde sibe newaranti enhle nenqubomgomo yokuthengisa ngemuva kokuqinisekisa ukuthi izingqinamba ezingalindelekile zingaxazululwa ngokushesha okukhulu. Intengo efanelekile, ikhwalithi ephezulu kanye nensizakalo engaguquguquki yilokho i-AOOD ezohlinzeka ngamakhasimende ethu.